आज मंगलबार, शास्त्रका अनुसार गर्नै नहुने यी ३ काम ! - Internet Khabar
Home Dharma आज मंगलबार, शास्त्रका अनुसार गर्नै नहुने यी ३ काम !
काठमाडौं। आज मंगलबार, हिन्दु बैदिक ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहका आधारमा बार र तिथिहरुलाई विभाजन गरिएको हुन्छ ।
माछा, मासु सेवन नगर्नेः मंगलबारको दिन तपाईले माछा नखाएकै राम्रो हुन्छ । आजको दिन माछा सेवन गर्दा आर्थिक नोक्सा हुन सक्छ भने मंगलबार मासु खाँदा पनि कुटुम्बको क्षय हुन्छ ।
पशु पन्छीको बलि नदिनेः मंगलबारको दिन पशु बलि दिने कार्यलाई अत्यन्तै खराब मान्ने गरिन्छ । यस दिन काटमार नगरेकै उचित हुन्छ । यदि काटमार गरेको यसले सन्तानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । त्यस्तै मंगलबार कुखुरा वा अन्य प‌ंक्षीको हत्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मान्ने गरिन्छ ।
मदिरा सेवन नगर्नेः तपाईले मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दै आइरहनुभएको छ भने त्यो पनि त्याग्नुपर्छ । मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दा तपाइँको क्रोधमा वृद्धी हुन्छ जसले अपराध समेत बढाउँछ । मंगलबार झगडा गर्दा बेइज्जत हुने विश्वास गरिन्छ ।
Previous articleआफ्नै पत्नीलाई पनि जबर्जस्ती करणी गरे अब ५ वर्ष जेल
Next articleविप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको बन्दको प्रभाव सामान्य
चन्द्रविनायक तथा भैरवनाथ जात्रा शुरु